Archive du 20170701
Fifidianana 2018 Filoha 3 ahilika…
Efa samy mikajy ny fifidianana 2018 ny mpanao politika eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao ka na ny mpitondra ankehitriny aza dia efa manana ny kajiny.
Fetim-pirenena Amerikanina Tsy natrehan’ny praiminisitra
Nomarihina omaly zoma 30 jona teny amin’ny trano fonenan’ny Masoivoho Amerikanina Robert T. Yamate teny Ambaranjana ny faha-241 taona nahazoan’i Etazonia ny fahaleovantenany ho an’ny fanamarihana eto Madagasikara.
Marc Ravalomanana Atahoran’ny fanjakana mafy
Miha mitombina ny hanakanana an’i Marc Ravalomanana tsy ho kandida amin’ny taona 2018.
Kohen Rivolala « Tokony ho mpanolotsain’ny filoha aho »
Efa novoizin’i Kohen Rivolala, mpanorina ny fivavahana Hebraika Judaisme eto Madagasikara sady mpitsabo amin’ny alalan’ny fomba ara-kabalistika « tik tak do » fa ny Malagasy dia taranaka Hebreo,
Voarara ny fanondranana Hasiana “puce électronique” ny omby
Nihena ny isan’ny omby eto amintsika ankehitriny. Toe-javatra mahatonga azy io ny firongatry ny halatra omby.
Tamberin’andraikitra sa valim-babena ?
Sarotra raisina ary tsy fantatry ny olom-pirenena loatra, hoy ny tompon’andraikitra mpanao fanentanana iray mikasika azy ity omaly ny dikan’ny tamberin’andraikitra ary anisan’ny tsikera efa
Antananarivo sy ny manodidina Nizara bodofotsy 1000 ny STAR
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika ankehitriny.
FANEDUCATION AGENCY Mitohy ny fandefasana mpianatra any ivelany
Ivontoerana iray manohana sy manampy ireo ankizy manana ny mari-pahaizana Bakalôrea maniry ny hanohy fianarana any ivelany ny “Faneducaton agency” eny Antsahavola.
Mpiasan’ny ladoany Niato aloha ny fitokonana
Tapaka taorian’ny fivorimben’ny mpiasan’ny fadin-tseranana, fa nitsahatra nanomboka omaly ny fitokonan’ny mpiasan’ny ladoany, mba hitsinjovana ireo mpandraharaha,
Eccova Antananarivo Namoaka mpianatra 270 mianadahy
Hanao ranolava ny famoahana mpianatra eo anivon’ny ECCOVA manerana ny Nosy tato ho ato.
Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena Nanda faninefany ny fanasan’ny CCOI
Tsy tontosa indray ny fanazavana amin’ny besinimaro mikasika ilay rafi-pampianarana vaovao (PSE) kasaina hampiharina amin’ity taom-pianarana vaovao ho avy ity izay saika hiarahana
Nitrangana vaovao hafahafa tany amin’ny distrikan’i Morombe, andro vitsivitsy lasa izay. Mandeha mantsy ny feo fa misy andian’olona tonga manapaka ny filahian’ireo zazalahy kely tsy voafora any an-toerana ka mirohotra manatona tobim-pitsaboana avokoa ny renim-pianakaviana rehetra.